FAAHFAAHIN: Qarax ka dhacay magaalada Boosaaso iyo Warar dheeraad ah oo ka soo baxaya.
August 12, 2019 NEWS 2
BOOSAASO(P-TIMES)- Faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaya qarax lala beegsaday mid kamid ah baabuurta ciidamada Badda Puntland oo marayey gudaha magaalada Boosaaso, waxaana dhaawacyo kasoo gaareen Askarta ilaalada ee baabuurkaas.
Laamaha Ammaanka kama aysan hadlin wararka laxariira qaraxan, balse ilo ku dhaw dhaw ayaa sheegaya in baaritaano la sameeyey lagu soo qabtay dad looga shakisan yahay falal amaan darro.
Sidaas oo kale warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in ruux Ajnabi ah uu qof ku dilay magaalada Boosaaso, kaas oo gacanta lagu soo dhigay, balse ilaa hadda ma cada sida dilkaasi u dhacay.
Laamaha Ammaanka ee gobalka Barri ayaa maalmihii udambeeyey waday howlgalo ay uga hortagayaan falalka amaan darro, waxaana horey u dhacay qarax lala beegsaday wasiirkii hore ee Qorsheynta Puntland.
Falalkii u dambeeyey waxaa sheegatay kooxda ISIS oo sheegtay in ay ka dambeysay weerarkii Wasiirkii hore ee Qorsheynta Puntland Shire Xaaji Faarax, waxaana kooxdaas ay fariisimo ciidan ku leedahay buuraleyda Caal-Barri ee gobalkaas.
Dadka boosaso wax qarxiyaa waa dad ka mida dadka dagan magaalada boosaaso oo ma aha dad meelo fog-fog ka soo dagaal tagay.Shabaab iyo Aysis magaaladay wax ka dagan yahiin oo waxay ka mid yahiin dadka sida caadigaa u jooga magaalada.Maamulka boosaaso iyo laamaha ammaanku ha soo heleen dadka qaraxyada dhiga jidadka boosaaso ee si caadi ah u dagan magaalada.
Bosaaso xalkeedu ma sahlana wayahan. Ciidan ka amanka wa in awood dherada lasiiyo. Magaladana ban dow laguso rogo. Talaabo walba oo looga hortagi karo waxa socdana wa in la qaado si deg dega.